အဆိုပါ Airedale Terrier - ဒီခွေးမွေးမြူခြင်း၏အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရန် - Breeds
Yorkshire ရှိ West Riding ရှိ Aire ၏ချိုင့်သည် Airedale Terrier ၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။ ရက်စွဲအတိအကျကိုမသိရသေးပါ၊ သို့သော်ကိုးရာစုအလယ်၌မျိုးဆက်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကြီးထွားလာသောစက်ရုံအလုပ်သမားများသည်တောအုပ်ကိုလိုက်ရှာရန်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်မွေးမြူခဲ့ကြသည်။ ဒီဂိမ်းကိုစနစ်တကျလိုက်ရှာဖို့ Otterhounds တစ်လုံးနဲ့ 'Terrier' ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလောက်လိုအပ်တယ်။
Airedale သည်“ Old English Black-and Terrier”၊ “ Broken-coated Working Terrier” နှင့်“ အကြမ်းဖျင်းအနက်ရောင်နှင့် Tan Terrier” တို့ဖြစ်သည်ဟု Otter Hound သို့အခြားသူများကြားတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အကောင့်အားလုံးသည် Border Collie (သို့) အခြားသိုးထိန်းသူနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်ဖြစ်နိုင်သောအချက်၏“ ဖန်တီးမှု” အကြောင်း။ အချို့သောအကောင့်များက Bull Terrier ကိုလည်းထောက်ပြနေပြီးအချို့ကမူဤအခြေအနေသည်ဘယ်သောအခါမျှဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဟုအခိုင်အမာဆိုထားသည်။
ဤခွေးများသည်မည်သည့်ရန်သူကိုမဆိုအနိုင်ယူရန်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကောင့်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရန်သူတို့၏ဖုတ်တောက်သောစွမ်းရည်ကြောင့်လူသိများသည်။ သူတို့ကသေနတ်များကျိုးပဲ့ပြီးပြန်လည်ရယူရန်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာရေကြွက်ပွဲတွေမှာအပြင်းအထန်ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်။
အဲလ်ဘတ် Payson Terhune က Airedale ကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည် -“ Aire သတ္တုတွင်းတွင်းရှိသတ္တုတူးဖော်ရေးအဖွဲ့များသည်သတ္တုတူးဖော်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်ခွေးတစ်ကောင်ကိုတီထွင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်အခြားသတ္တုတူးဖော်ရေး၏ခွေးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုများမှခေတ်သစ် Airedale ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူသည်လျင်မြန်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော၊ ဦး နှောက်၏ကြီးမားသော၊ နည်းပြနည်းပြနည်းနည်းပဲရရင်သူမသင်ကြားနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ သူ့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလက်မအသုံးပြုနေသည်။ အဘယ်သူမျှမ flabby ဘေးထွက်ပစ္စည်း။ ပြီးပြည့်စုံသောစက် - ဦး နှောက်ပါသည့်စက်တစ်လုံး။
အမေရိကသို့လူသိများသောပထမဆုံး Airedale ကို Bruce H. C. C. Mason မှယူဆောင်လာသည်။ ဘရုစ်သည်အပင်၏အမြစ်ဖြစ်သော Airedale Jerry ၏ရေကာတာဖြစ်သည့် Bess ၏သရဲဖြစ်သည်။
Airedales တွေဟာကစားကွင်းကြီးတွေကနေအမဲလိုက်ခြင်း၊ အမဲလိုက်အမဲလိုက်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးရဲခွေးတွေဖြစ်ခြင်း၊ Airedale တိုင်းသည်နယ်ပယ်တိုင်းတွင်ထူးကဲသည်မဟုတ်သော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှများစွာသောတာ ၀ န်အမျိုးမျိုးကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် Airedales များကိုအမဲလိုက်ခွေးများ၊ စောင့်ကြည့်သောခွေးများနှင့်နာခံမှုနှင့်သွက်လက်သောခွေးများအဖြစ်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သစ္စာ၊ သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာအဖော်များဖြစ်သည်။
Airedales သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစားအစာများကိုကောင်းစွာစားသုံးသည်။ အချို့တွင်အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့သောယားယံသောအသားအရေရှိနိုင်ပြီးအချို့သောအဆီများနှင့်သိုးမွေးများဖြင့်လည်းဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ Airedales အများစုသည်သိုးနှင့်ဆန်အစားအစာများကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။
ဒီမှာဖော်ပြသင့်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ခွေးကလေးကိုဘယ်လောက်ကျွေးမလဲ။ အချို့သောသုတေသနပြုချက်များအရခွေးပေါက်စအစာကိုကြာကြာစားခြင်းသည်ခွေးများ၏တင်ပါးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သီအိုရီအနေဖြင့်ခွေးပေါက်စဖော်မြူလာများ၌တွေ့ရသောပရိုတင်းပမာဏများပြားခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအရိုးစုအားအလေးချိန်မထောက်ပံ့မီကြီးထွားမှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အချို့မျိုးဆက်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအစားအစာများကိုစောစောစီးစီးအစာကျွေးကြသည်။ လူအများစုသည် ၈-၁၀ လအရွယ်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအစားအစာများကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းကြသည်။ တနည်းကား, ဒီမျိုးဆက်များနှင့်သင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်အတူဆွေးနွေးရန်တစ်ခုခုဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Airedales များသည်ထူးခြားသောဘုရင်၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်။ ညှပ်နေကြသည်။ ကောင်းမွန်သော groomer သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ မရရှိပါကသင်၏နယ်မြေရှိမျိုးဆက်တစ်ခုအားဆက်သွယ်ပါ။ များစွာသောသူတို့သည်သတို့သားအကူအညီကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ပေးလိုကြလိမ့်မည်။ ဆံပင်အသေကောင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် Airedales များကိုနေ့စဉ်ဖြီးဖြီးဖြင့်ဖြီးသင့်သည်။ သူတို့၏ပရိဘောဂများ (ခြေထောက်ဆံပင်နှင့်မျက်နှာဆံပင်) များချောသောကြောင့်ဆံပင်အသစ်များလည်းကြီးထွားလာစေနိုင်သည်။
Airedales ကသူတို့ကြီးထွားဖို့ခွင့်ပြုလျှင်၎င်းတို့၏အင်္ကျီကို 'မှုတ်' လုပ်ပါ။
ပြသခံရမည့်ခွေးများကိုချွတ်။ ချုံ့သည်။ ဤသည်ကိုဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ၏အဆုံးမှာစာအုပ်စုံတွဲတစ်တွဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးကြိုးစားရန်ခက်ခဲသောအနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Airedales တွေဟာသူတို့မိသားစုတွေနဲ့အတူနေချင်ပေမယ့်တီးခတ်ပြီးကစားရတာနှစ်သက်တယ်။ ခိုင်ခံ့သောနေရာသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်နှင့်ကစားရန်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကစားပြီးနောက်သူတို့သည်အိမ်သူအိမ်သားခွေးများပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
Airedales တွေဟာတူးဖော်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ သူတို့ကကျိန်းသေ 'terre-iers' ဖြစ်ကြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းpreparingရိယာပြင်ဆင်နေစဉ်အမြဲသတိရပါ။
သေတ္တာကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်ခွေးငယ်အတွက်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ သူအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကို“ တွင်း” အဖြစ်အသုံးပြုပြီးခရီးသွားရန်သို့မဟုတ်သင်၏အလုပ်တာရှည်သည့်အတွက်လုံခြုံသောနေရာရှိသည်။
Airedales တွေဟာအရမ်းကိုတက်ကြွတဲ့ခွေးတွေဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့ကတီးခတ်ဖို့နဲ့ကစားဖို့မျှမျှတတကြီးမားတဲ့needရိယာလိုအပ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ Airedale အတွက်အလွန်ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပျော်စရာအချိန်ဖြစ်သည်။
Airedales များသည်“ ခွေးများကိုရန်လိုတတ်သူ” ဖြစ်လေ့ရှိပြီးလူမှုရေးနှင့်နာခံမှုကိုလေ့ကျင့်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
အခြားဝတ်ရည်များနည်းတူသင်၏ Airedale ကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကစတင်ပေါင်းသင်းပါ။ လူမှုရေးခွေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်ပြီးနာခံမှုရှိတဲ့အဖော်အတွက်အခြေခံကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ Airedales များသည်“ ခွေးများကိုရန်လိုတတ်သူ” ဖြစ်လေ့ရှိပြီးလူမှုရေးနှင့်နာခံမှုကိုလေ့ကျင့်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သင့်ခွေးသည်သင့်ကိုလေးစားရမည်။ သို့သော်သင်လေးစားရမည်။ သင့်ခွေးကလေးသည်နေထိုင်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူကအိပ်ရာပေါ်မှာခွင့်ပြုမလား? တသမတ်တည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖော်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ခွေးပေါက်စသင်တန်းတွေဟာစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ။
Airedales သည်ကြမ်းတမ်းသောလေ့ကျင့်မှုနည်းလမ်းများကိုကောင်းစွာမတုံ့ပြန်ပါ။ သူတို့ကမင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပေမယ့်သူတို့ဘာတွေမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိဖို့လိုတယ်။
သင့်ရဲ့ခွေးမွေးဖွားမထားပါနဲ့။ Airedales တွေဟာစက်ရုပ်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ သူကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုသူကိုအရင်သွားကြည့်မယ်၊
Airedales သည်“ တွေးခေါ်သူများ” ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ မိုက်မဲသောအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုမမေးပါနဲ့။ ဇူလိုင်လပူပြင်းသည့်နေ့တွင်တရားသူကြီးသည်အရိပ်တွင်ရပ်။ “ တရားသူကြီး” သည်ခွေးများကိုနေထဲ၌ထားရန်မိုက်မဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သမီးငယ်လေးပြိုလဲခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာဖြစ်သည်။
အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုကိုသုံးပါ။ သင်မည်မျှပင်မိုက်မဲစွာပြုမူသည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ သူသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ခံစားရမည်။ ဖန်တီးမှုရှိပါ။ ကိုသတိရပါ, Airedales တွေးခေါ်မဟုတ်ဘဲစက်ရုပ်မဟုတ်ပါဘူး။
“ လေ့ကျင့်ခြင်း” တစ်ခုချင်းစီကိုသင်၏အဖော်နှင့်ပိုမိုလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ချဉ်းကပ်ပါ။ သင့်ခွေး၏ရှုထောင့်မှ command တစ်ခုစီကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါ။ ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံသည်လေ့ကျင့်နေစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်သောအပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
ကြောက်စိတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်သောလူများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပါ။ နာခံမှုဆိုင်ရာနည်းပြတစ် ဦး သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုသင်၏ Airedale ကို“ ပြီးပြည့်စုံသော” Shelties, Borders နှင့် GSDs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်။ Bired Coller သင်တန်းဆရာကသင်ကြားပေးသောနာခံမှုအတန်းတွင် Airedale အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံပြင်ကိုကြားခဲ့ရသည်။ စာသင်ခန်းတစ်ခုအတွင်းသူတို့သည်ဒေါက်ဖိနပ်ပုံစံများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Airedale ရုံခုန်များ၏ရှေ့မှောက်၌ပြီးပြည့်စုံသောထိုင်ကနေစောင့်ကြည့်နေစဉ်နည်းပြဆရာနှင့် Border Collie တစ်ခုန်ကျော်ဖရိုဖရဲအဖြစ်နည်းပြဆရာပုံစံကိုလိုက်နာရန် Airedale ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထွက်ညွှန်ပြအလုပ်များခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 'မိုက်မဲသော' terrier ရုံ 'ပြုံး။ '
သင်၏ Airedale ကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရမည်။ မျှော်လင့်မထားရာကိုမျှော်လင့်ပြီးသင်၏အဖော်ကိုသိပါ။ တစ်စတုရန်းတံစို့ပတ်ပတ်လည်အပေါက်ထဲသို့သွင်းရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ဒါဟာ Airedales လေ့ကျင့်သင်ကြားမရနိုငျသောအလွန်ဘုံအယူအဆမှားသည်။ Airedales သည်ပိုမိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော၊
သင့်ရဲ့ Airedale ခွေးကလေးကိုရွေးချယ်တဲ့အခါနာမည်ကြီးမျိုးဆက်တစ်ခုရှာဖွေပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်သင့်ခွေးကလေးရဲ့အိမ်ကိုသွားပါ။ မည်သည့်ခွေးတစ်ကောင်၏ဘဝ၏ပထမ 8 ပတ်သည်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသတိရပါ။ အဖော်အဖက်များ၊
မျိုးပွားသူနှင့်မဆွေးနွေးမီမေးခွန်းများကိုစာရင်းပြုစုပါ။ ခွေးကလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပါ။ ခွေးပေါက်စများသည်မျိုးဆက်များကိုမည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။ သင့်ကိုသူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ။ သူတို့ဒေသကသန့်ရှင်းလား။ မိဘများအား dysplasia စစ်ဆေးခြင်းရှိမရှိကိုမွေးမြူသူအားမေးမြန်းပါ။ ဓာတ်မတည်တစ်မိသားစုသမိုင်းရှိခဲ့သလား ခွေးပေါက်စကလေးတွေကပတ်ပတ်လည်ရှိလား သူတို့ကြောင်တွေပတ်ပတ်လည်မှာရှိလား အနာဂတ်မှာမေးခွန်းတွေဖြေဖို့မျိုးဆက်တွေရနိုင်မလား။ မျိုးဆက်သည်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းပါသလား
မျိုးပွားသူများအနေဖြင့်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်၏ကျန်းမာရေးကိုမဆိုအာမခံရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်မျိုးပွားသူသည်တိရစ္ဆာန်ကိုပြန်ယူပြီးအစားထိုးရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်။ တာဝန်ရှိသောမျိုးဆက်များသည်သင်အားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်သင်ကတိရစ္ဆာန်ကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်ပါက၎င်းတို့ထံပြန်ပို့ပေးရန်တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ ဤအရာသည်၎င်းတို့အားတိရိစ္ဆာန်များအားအနာဂတ်တွင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေသည်။ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားသလဲ။ အဆိုပါခွေးပေါက်စတီကောင်ခဲ့သလဲ (ရာသီဥတုကြောင့်variousရိယာအမျိုးမျိုးသည်အမျိုးမျိုးသောပိုးမွှားအဆင့်အမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။ ) ဤအရာသည်သင်မေးသင့်သည့်မေးခွန်းအချို့၏ဥပမာသာဖြစ်သည်။
သငျသညျလာရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့အရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူ, သင်တစ် ဦး သဟဇာတမွေးမြူရေး, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး သဟဇာတတိရိစ္ဆာန်နှင့်မျိုးဆက်များလည်းရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင် !! သင့်ရဲ့မျိုးဆက်မှမေးခွန်းများကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထား။ သူ / သူမသည်နာရီ၊ အချစ်၊ အတွေးနှင့်စွမ်းအင်များစွာရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသောတိရိစ္ဆာန်အတွက်အဖော်ရွေးချယ်သည်။
သင်သည်သင်၏ခွေးကလေးကိုကောက်ယူလိုက်သောအခါမျိုးတွင်သင့်မျိုးပွားသူသည်ခွေးကလေး၏အချိန်ဇယား၊ အစားအစာအမှတ်တံဆိပ်ကိုပြောပြနိုင်ပြီးအနာဂတ်အစားအစာကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အစားအစာတွင်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ခွေးပေါက်စ၏အစာခြေစနစ်ကိုအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးအစာအိမ်နှင့်အသည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ Airedale ဟာအတော်လေးနည်းနည်းစားနိုင်ပါတယ်၊
သင့်ခွေးကလေးအသစ်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာနောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် Cindy Moore မှရေးသားထားသော“ Your New Puppy” ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော RPD FAQ ကိုကြည့်ပါ။
ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်သတိရပါ၊ ခွေးဟောင်းတစ်ကောင်သည်သင့်ခလေးအားငယ်ရွယ်သောခွေးတစ်ကောင်ထက်သင့်အခြေအနေနှင့်ပိုသင့်တော်သည်။ မျိုးဆက်များစွာသည်ခွေးများနှင့်ခွေးများကိုနေရာချကြသည်။ ဤခွေးများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်ပြသနာအမျိုးမျိုးအတွက်မျိုးပွားသူများထံပြန်ပို့ခြင်းခံရသကဲ့သို့ရင့်ကျက်ခြင်းမရှိသော“ ပြသခြင်းအလားအလာများ” ဖြစ်သည်။ (ခွေးအဟောင်းကိုမွေးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည်မွေးစားနိုင်သောအိမ်ကောင်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးခွေးများသည်အပိုဆောင်းအလုပ်များရန်လိုအပ်လေ့ရှိပြီး၊
ခွေးပေါက်စသို့မဟုတ်ခွေးဟောင်းကိုစဉ်းစားပါကပိုမိုသိရှိလိုပါက Cindy Moore မှရေးသားသော“ Your New Dog” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် RPD FAQ ကိုဖတ်ပါ။
Airedales နှင့်အခြား terrier များသည်အလွန်စမတ်ကျပြီးလူသိများသောခွေးများဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေမှာထားသင့်တဲ့ခွေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျသူတို့၏လိမ္မာပါးနပ်အတော်လေးအံ့အားသင့်နိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ထားသော Airedale သည်သင်၌အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်သည်။ သင်၏ဟာသဉာဏ်နှင့်သင့်ခွေးအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအမြဲတမ်းထားပါ၊ သင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိဘဲအဖော်နှင့်အတူဆုချလိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်သောမိတ်ဆွေကဲ့သို့စမတ်ကျ၊ စိတ်ရှည်သည်၊
ယေဘုယျအားဖြင့် Airedales များသည်အလွန်ကျန်းမာပြီးမာကျောသောတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။ အချို့သူများသည်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းသည်အသေးအဖွဲသာဖြစ်သည်။
Airedales ကဲ့သို့သောအခြားကြီးမားသောမျိုးရိုးဗီဇများကဲ့သို့ပင်တင်ပါးဆိုးရွားသောရောဂါလက္ခဏာများရှိသည်။ ဤအမှုများကိုတွေ့ရလေ့မရှိသော်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။ ခွေးတစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်သောအခါမျိုးပွားသူအားမိဘတို့၏တင်ပါးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းမေးမြန်းပါ။ မျိုးဆက်အတော်များများသည်တစ်နှစ်တွင် (x-rays OFA နံပါတ်အတွက်မပို့နိုင်သေးပါ) ကတင်ပါးဆုံရိုး x-rays ကို“ ပြသရန်” အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုမစတင်မီပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရေပြားတွေရှိရင် Airedales တွေ၊ ဒါကများစွာသောအရာ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်အစားအသောက်ပြproblemနာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည် hyperthyroidism သို့မဟုတ် hypothyroidism ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကိုပုံမှန်အားဖြင့်အလွယ်တကူကုသနိုင်သည်။ “ ယားယံခြင်း” အရေပြားသည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဓာတ်မတည်အစားအစာသို့မဟုတ်အခြားဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကပထမဆုံးအစားအစာကအစားအသောက်နဲ့ပါ။ အချို့သော Airedales များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသိုးသငယ်နှင့်ဆန်အစာကိုပိုမိုစားသုံးကြသည်။
သင်၏ Airedale နားရွက်ကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင်အမြဲတမ်းအချိန်ယူပါ (၎င်းသည်ရောဂါကူးစက်မှုသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်)၊ ခြေချောင်းများ၊ ခြေသည်းများကိုဖြတ်ခြင်း၊ သွားများကိုသန့်ရှင်းခြင်း (အိမ်တွင်ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သွားဖုံးရောဂါနှင့်အခြားသွားဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ) အဆိုပါ VET မှခရီးစဉ်များအတွက်လေ့ကျင့်ပါ။ ) နှင့် pads အကြားချုံ့ဆံပင်စောင့်ရှောက်ရန်သတိရပါ။
သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်မျိုးပွားသူနှင့်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏inရိယာအတွင်း Airedale မျိုးဆက်များကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
အမေရိက၏ Airedale Terrier ကလပ်သည်အသင်း ၀ င်စာရင်းကိုထိန်းသိမ်းသည်။ သို့မဟုတ်၊ Airedale ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
မျိုးဆက်တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းသည်မျိုးပွားခြင်း (သို့) ခွေးပေါက်စကိုရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်။ အထက်ဖော်ပြပါသတင်းအရင်းအမြစ်များကို ဆက်သွယ်၍၊ ခွေးပြပွဲများသို့သွားပါသို့မဟုတ်ထိုဒေသရှိ ၀ န်ကြီးဌာနများနှင့်စကားပြောသင့်သည်။ တတ်နိုင်သမျှအမျိုးမျိုးသောမျိုးဆက်များနှင့်ပြောဆိုပါ။ သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိုသောသင့်အတွက်သင့်လျော်သောတိရိစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီလိုသောမျိုးဆက်တစ်မျိုးကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သည်။ သင်၏မျိုးဆက်ကသင့်ကိုမေးခွန်းများမေးသင့်သည်။ သူ / သူမသည်သင်၏စောင့်ရှောက်မှုခံနေရသောခွေးကလေး၏အကျိုးကိုအလွန်စိုးရိမ်သင့်သည်။ သငျသညျမျိုးဆက်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်လျှင်, သင်ရပါမည်။ သင်မျိုးဆက်နှင့်သူ / သူမ၏တိရိစ္ဆာန်များအကြားအပြန်အလှန်လေ့လာသင့်သည်။ တိရစ္ဆာန်များသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း၊ ဂရုစိုက်ပြီးသန့်ရှင်းပုံရသလော။
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်သင့်အားကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများ၊ မျိုးရိုးလိုက်နှင့်စာချုပ်များကိုတင်ပြလိမ့်မည်။ ဤစာချုပ်အများစုသည်အနည်းဆုံးအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်လိမ့်မည် -
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိရိစ္ဆာန်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားသင့်သည် (နှင့်အခြားကျန်းမာရေးပြconcernsနာများကိုဂရုစိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှလုံးနို့၊ အူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးကောင်များ၊ ခွေးလှေးထိန်းချုပ်ခြင်းစသဖြင့်)
အားလုံး leash ဥပဒေများလိုက်နာရလိမ့်မည်
တိရိစ္ဆာန်များကို spayed သို့မဟုတ် neutered (အထူးသဘောတူညီချက်မရှိပါက; ဆိုလိုသညျအလားအလာပြပွဲအလားအလာမရှိလျှင်) ခံရကြလိမ့်မည်
မျိုးချစ်သူအများစုသည်အထူးသဘောတူညီချက်မရှိပါကခွေးများကို AKC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြင့်သာရောင်းချမည်။ သင်၏မျိုးဆက်သည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်နောင်လာမည့်ပြproblemsနာများ (သူတို့ပေါ်ပေါက်ပါက) ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ 1998 ATCA တန်းစီဇယားနှင့်သတင်းအချက်အလက်စာအုပ်ငယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူများသည်၎င်းတို့လိုအပ်သောခွေးများအတွက်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပြီးလိုအပ်သည့်အကူအညီများလိုအပ်လျှင်ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောနေအိမ်အသစ်များသို့နေရာချထားခြင်း။ တာဝန်မဲ့မျိုးဆက်များသည်ဤမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။
AKC ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာခွေးကိုမှတ်ပုံတင်ထားသော်လည်းထိုခွေးမှထုတ်လုပ်သောအမှိုက်သရိုက်များသည်မှတ်ပုံတင်ရန်မသင့်ပါ။ အကန့်အသတ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာခွေးသည် AKC လိုင်စင်ရဖြစ်ရပ်များတွင် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုရ၊ သို့သော် Herding Trials နှင့်နာခံမှုစမ်းသပ်မှုများကဲ့သို့သောအခြားလိုင်စင်ရဖြစ်ရပ်များတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ခွေးများအားလုံးကဲ့သို့ပင်ကလေးများနှင့်ခွေးနှစ်ကောင်စလုံးအားအချင်းချင်းလေးစားရန်သင်ကြားပေးရမည်။ ကစားစရာများကိုယူခြင်းသို့မဟုတ်သူခွေးစားနေစဉ်ခွေးကိုအနှောက်အယှက်ပေးခြင်းသည်အလေ့အကျင့်ကောင်းမဟုတ်ကြောင်းကလေးများကိုသင်ရမည်။ ထို့အပြင်လူများကိုခုန်ခြင်း (သို့) ပါးစပ်ဖြင့်ထိုးခြင်းသည်လက်ခံနိုင်သောစရိုက်များမဟုတ်ကြောင်းခွေးအားသင်ကြားသင့်သည်။ အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိရမည် (မည်သည့်ခွေးမဆိုမီဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်) ။ လူတိုင်းကို (လူကြီးများ၊ ကလေးများနှင့်ခွေးများ) ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်တသမတ်တည်းဖော်ပြရမည်။ သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်မှုနှင့်သည်းခံမှုနှင့်အတူ Airedales သည်သက်ကြီးရွယ်အိုကလေးများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်သည်ကလေးငယ်နှင့်မည်သည့်ခွေးကိုမျှဂရုမစိုက်ဘဲဘယ်တော့မှထားခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ခွေးကိုကလေးများနှင့်မိတ်ဆက်သည့်အခါလေ့ကျင့်ရေးတွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူရန်အလွန်အကြံပေးသည်။ ခွေးသည်ခွေး၏အရေးပါမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုလျှော့မတွက်ဘဲအဆင့်ဆင့်အတွင်း၌“ ခွေး” ၏အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ခြံစည်းရိုးခြံသည် Airedale ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသောအပေါင်းဖြစ်သည်! သင့်အိမ်သို့ခွေးတစ်ကောင်ကိုမခေါ်ဆောင်မီသင်ဖျားနာခြင်း၊ နောက်ကျခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ခွေးကိုလမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်နေ့များတွင်သင်ဘာလုပ်မည်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ areasရိယာတော်တော်များများတွင် leash law အချို့ရှိသည်။ ခွေး၏ကျန်းမာရေးအတွက်မည်သည့်နယ်နိမိတ်မျှမရှိဘဲခွေးအားလွတ်လပ်စွာပြေးခွင့်မပြုသင့်ပါ။ Airedales များကိုအမဲလိုက်ရန်မွေးမြူခဲ့သည်ကိုသတိရပါ။ အထူးသဖြင့်ကြောက်စရာများသည်ပျော်စရာအတွက်မဆင်မခြင်စွန့်လွှတ်ပြီး“ furry သတ္တဝါများ” ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလိမ့်မည်။
အချို့သောမျိုးပွားများနှင့်မတည့်သူများစွာသည် Airedales နှင့်အတူပြသနာများနည်းပါးပုံရသည်မှန်သော်လည်းသင်၌ဓာတ်မတည့်ခြင်းသည်သင် Airedale ရရှိရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်စုဝင်တစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါစိတ်ထား၊ အရွယ်အစား၊ သင့်အချိန်ဇယားနှင့်အခြားအရာများစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင်နှင့်သင့်အတွက်ပိုသင့်တော်မည့်“ မတည့်မှုနည်းသော” အခြားမျိုးကွဲများ (ဥပမာ - Poodles) လည်းရှိသည်။
Airedales အဟောင်းများသည်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့ပြောင်းလို့ရလား။ ကယ်ဆယ်ရေးဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးတဲ့ခွေးကငါ့အတွက်ဘယ်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ။
Airedales များသည်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များသို့အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များနည်းတူသူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအခြေအနေများကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ ခွေးအဟောင်းတွေဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာခွေးပေါက်စများထက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေတစ်ခုအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာမိသားစုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးခွေးကလေးကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောကိစ္စဖြစ်သည်။ သငျသညျအနညျးငယျအဟောင်းတွေဖြစ်ကြပြီးခွေး၏မိတ်ဖက်ချင်ပေမယ့်ခွေးတစ်ကောင်၏စွမ်းအင်ချင်တယ်။ သင်ကပြေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအဖော်လိုချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ (ခွေးကလေးငယ်တစ်ကောင်သည်ရွှင်လန်းစွာကစားရန်မသင့်လျော်ပါ။ ) သက်ကြီးရွယ်အိုတိရိစ္ဆာန်သည်သင့်အိမ်နှင့်ပိုမိုသင့်တော်သောအခြေအနေများရှိသည်။
တိရစ္ဆာန်အဟောင်းများကိုကယ်တင်ရန် (မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါစေ) သို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောအိမ်သို့မျိုးပွားလိုသောသက်ကြီးရွယ်အိုတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်နိုင်သည်။ တတ်နိုင်သမျှတိရိစ္ဆာန်နောက်ခံကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရယူပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသင့်သည်။ အကယ်၍ သက်ကြီးရွယ်အိုတိရိစ္ဆာန်သည်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်လိုအပ်သည့်“ ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း” ကိုလည်းစဉ်းစားရမည်။ တိရစ္ဆာန်သည်ဤမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အိမ်မှအိမ်ပြန်ခြင်းနှင့်အိမ်မှအိမ်တွင်အိပ်ရာပေါ်အိပ်ခြင်းသည်အဆင်ပြေသော်လည်းတိရစ္ဆာန်စည်းကမ်းများမှာမီးဖိုရှေ့ရှိခွေးအိပ်ရာပေါ်တွင်ရှိသည်။ မွေးမြူသူတစ် ဦး ကအဟောင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်နည်းကို၎င်းကိုခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ဆက်ဆံရန်၊ သူ / သူမဘာမှမသိကြောင်းနှင့်သူ / သူမ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Airedale ကို crate-train လုပ်သင့်ပါသလား။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့သေတ္တာလေ့ကျင့်ရေးဟာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ Airedale ကိုအမူအကျင့်နှင့်အိမ်တွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရနေထိုင်ရန်လေ့ကျင့်ရန်အစားထိုးသင့်သည်။ သို့သော်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနားယူရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောသက်တောင့်သက်သာဖြစ်ရန်မသုံးသင့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ခွေးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ခရီးသွား။ သင်၏ခွေးကိုသူ / သူမ၏သေတ္တာသည်သူ / သူမ၏နေရာဖြစ်သည်ဟုသင်ကြားပေးခြင်းသည်ကုမ္ပဏီသို့ရောက်သောအခါ၊ သူသည်အိမ်ပျက်နေသောအခါနှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အချုပ်အနှောင်ခံရရန်လိုအပ်သည်။ ငါဟာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့အတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်။ သူမဟာချုပ်နှောင်ထားခံရတာကိုမထင်မှတ်ပဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောကြောင့်အိမ်ကိုစောစောပြန်ပို့ခဲ့ရတယ်။ ငါသေတ္တာကိုလေ့ကျင့်မဟုတ်သောအခြားတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုထို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Pitbull မျိုးကွဲများနှင့် Pitbulls အမျိုးအစားများ - Pitbull ၏စာရင်း
black lab blue heeler ခွေးပေါက်လေးများ
နွေရာသီအတွက်စံ poodle ဖြတ်တောက်မှု
Golden retriever husky ရောခွေးပေါက်စလေးများ